Mayelana nefilimu ebhekene neplywood
Impahla eluhlaza esetshenziswe kwifilimu ephezulu ebhekene nefilimu yokwakha i-birch enobuningi be-700KG / M3. Ngenxa yokuthi impahla ye-birch inzima, ifilimu ebhekene neplywood e eyenziwe nge-birch isicaba kakhulu futhi inamandla amakhulu okuthwala umthwalo. Ngeke kube nokugoba ngaphansi kwengcindezi ephezulu. Ngaphezu kwalokho, igagasi ...
Ipulangwe luhlobo lwebhodi lezinkuni elenziwe ngabantu elihlanganiswa kabusha ngokuxebuka. I-plywood yenziwa ngokusika ezindaweni ezibonakalayo ezinkulu ekuqondiseni amasongo wonyaka. Ngemuva kokumiswa nokubopha, kukhiqizwa ngokuya ngesilinganiso sokuma okusanhlamvu okuma mpo kwama-mahogany ama-veneers aseduze. Okundikindiki ...
Ipulangwe lasolwandle - ipulangwe elingenamanzi
I-ROCPLEX plywood yasolwandle ingenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu ngokhuni zokwenziwa kwefenisha engenamanzi kanye nomswakama kanye nokuhlobisa. Ingakhuphula izinga lokusetshenziswa kwezinkuni futhi iyindlela eyinhloko yokonga izinkuni. I-ROCPLEX plywood yasolwandle ingasetshenziswa kuma-yachts, embonini yokwakha izakhiwo m ...